Miaraka amin'ny macOS 10.13.3 beta developer dia ny tvOS 11.2.5 sy watchOS 4.2.2 betas | Avy amin'ny mac aho
Miaraka amin'ny macOS 10.13.3 beta developer dia ny tvOS 11.2.5 sy watchOS 4.2.2 betas
Ny kinova beta an'ny tvOS 11.2.5 sy watchOS 4.2.2, azo ampiasaina ho an'ny mpamorona ihany koa. Amin'ity tranga ity, ary toy ny kinova macOS High Sierra navoaka, tsy misy fiovana lehibe hafa ankoatry ny fanatsarana ny fitoniana sy ny filaminana ary ny fahombiazan'ny rafitra.
Apple dia namoaka kinova ho an'ny OS samihafa nandritra ny roa andro ary izany dia famantarana mazava fa tsy mijanona ny asa. Na dia marina aza fa ny fanatsarana dia tsy azo jerena mivantana amin'ny fampiasana na ny interface amin'ny rindrambaiko navoaka, dia mitovy na manan-danja kokoa aza hadisoana sy hadisoana marina hita ao amin'ireo kinova taloha.
tvOS dia mitohy amin'ny laharany ary tsy misy fanatsarana kely na tsy misy na inona na inona ho an'ireo mpampiasa manana ny boaty ambony napetraka eo amin'ny lafiny asa na rindranasa misy. Raha tsy mifantoka amin'ny watchOS isika dia afaka manamarina fa ny kinova farany manome fiainana kely kokoa ny bateria (izay amin'ny maodely 2 sy 3 dia efa tena tsara) ary ambonin'izany rehetra izany fitoniana kely kokoa amin'ny tsipika ankapobeny. Navoaka ihany koa ny IOS beta efatra miaraka amin'ny fanatsarana sasany mifandraika amin'ny mpanampy Siri.
Aza adino fa amin'ny tranga watchOS dia tsy manana beta ampahibemaso isika fa amin'ny macOS, iOS ary tvOS dia manana safidy hametraka ireo betsa ampahibemaso ireo isika raha mbola misoratra anarana amin'ny programa developer. Na eo aza izany, ny tolo-kevitray momba ireo kinova beta navoaka ho an'ny mpamorona ary taty aoriana ho an'ireo mpampiasa izay voasoratra anarana ao amin'ny programa beta ho an'ny daholobe, dia tokony hialana amin'izany raha sanatria ka misy tsy fahombiazana na tsy mifanaraka amin'ny fitaovanay na ny rindranasa izay hanenenantsika taty aoriana .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Miaraka amin'ny macOS 10.13.3 beta developer dia ny tvOS 11.2.5 sy watchOS 4.2.2 betas
Bartomeu dia hoy izy:
Ilaina ny fanavaozana ny watchOS noho ny lesoka sasany. Ny iray amin'izy ireo dia ny fampandrenesana, na avy amin'ny dpi manokana na avy amin'ny antoko fahatelo. Ohatra iray mazava ny tsy fahombiazan'ny fampahatsiahivan'ny BreatH, izay tsy mahomby amin'ny Andiany 2 sy Series 3; manamarika fampahatsiahivana 7 ary tsy manao na iza na iza whimsical tsindraindray. Izany dia mitranga amin'ny ivelany sasany.
Mamaly an'i Bartomeu
Ny Apple Store ao Zurich dia voatery nafindra toerana noho ny firehetan'ny afo
Makà Mac somary mora kokoa ao amin'ny Media Markt